Meksika: Mbola Velona Ilay Mpikatroka Aleph Jiménez Tsy Hita Nandritra Ny Fotoana Ela · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Oktobra 2012 10:10 GMT
Mbola velona sy salama tsara i Aleph Jiménez, mpikatroka amin'ny #YoSoy132 rehefa tsy hita popòka nandritra ny herinandro maro, hita tao an-tanànan'i Meksika La Paz izy, 800 metatra mahery miala amin'i Ensenada, toerana onenany.
Taorian'ny nahitana azy, nentina tany an-drenivohitr'i Meksika i Jiménez mba hanao fanambarana amin'ny Komisiona nasionaly misahana ny Zon'olombelona. Tamin'ny fanadihadiana [espaniola] nataon'ny gazety azy voalohany androany, nanambara i Jiménez fa niafina izy noho ny antony ara-piarovana ny tenany, satria efa nisy namono ny mpiara miasa aminy anankiroa, narahinà fiara tsy fantatra iray izy sy ny mpikatroka sasany hafa izay toa fantatra fa fiara mitsikilo sy mihaino azy ireo.
Nandao ny tanàna i Jiménez ary tsy niteniteny tamin'iza na iza, nilaza izy fa tsy niresaka mihitsy tamin'ny namany sy ny fianakaviany noho ny tahotra sao misy manaraka. Olona fantany no sendra nahita azy ary nanapa-kevitra ny hipoitra amin'izay izy rehefa nahita fa somary efa nilamina ny momba azy. Nanambara i Jiménez fa mbola tsy hiverina any amin'ny Firenena niaviany any Baja California izy aloha.
Fanehoan-kevitra samihafa [es] momba izany vaovao izany no nalefan'ny mpiserasera Meksikana tao amin'ny Twitter, nanjary lasa nisalasala ny sasany manoloana ny fanambarana sy ny fandrisihan'i Jiménez, ny hafa kosa naneho ny fanohanany an'i Jiménez. Ohatra, @armandonune [es] nanoratra hoe:
Aleph Jiménez, sary tao amin'ny mpisera Twitter @FamiliaAlephJ
@armandonune:Tsy misy izany ny fanjavonan'i Aleph Jimenez, tahaka ny tantaran'ankizy ny fitantaran'i Aleph na izy noterena hilaza tahaka izany na te-halaza fotsiny izy.
Toy izany ihany koa, Gustavo Andrade (@SrDonGustavo) [es] nanoratra hoe:
@SrDonGustavo: Nitsoaka i Aleph Jimenez noho ny antony ara-piarovana ny tenany, kanefa manakana fiara izy manerana ny arabe? Ahoana? Misy olona afaka manazava izany amiko ve?
Etsy andaniny, Jessica (@jessica_am) [es] nanamarika hoe:
@jessica_am: Mampatahotra ahy ny mahita fa misalasala ny amin'ny nahazo an'i Aleph Jiménez ny “mpanao gazety”‘ ary adinon'izy ireo ny nilaza fa tena natahotra mafy tokoa ange ity lehilahy ity.
Mitovy tahaka izany, Cecilia Cisneros C. (@CCCCecilia) [es] nilaza hoe:
@CCCCecilia: Raha matahotra ianao, dia mahatsiaro misy manao herisetra, manaraka, mandrahona… Inoako fa izany ihany no ahafanao mitsara ny fitantaran'i Aleph Jimenez. Mbola tsy nitranga tamiko izany